आमाकै संलग्नतामा बाबुले गरे २१ वर्षसम्म छोरीमाथि बलात्कार « Phidim Today
आमाकै संलग्नतामा बाबुले गरे २१ वर्षसम्म छोरीमाथि बलात्कार
Published on: 12 September, 2019 1:16 pm
फिदिम टुडे । विश्वभर यौन हिंसाको घटना एउटा ठूलो समस्या बन्दै गहिरहेको छ । सार्वजनिक ठाउँमा होस् या घरभित्र यौन हिंसाको सिकार महिला बन्दै आइरहेका छन् । हालै मात्र बेलायतमा २८ वर्षिय रचेल नाम गरेकी महिलाले आफू आफ्नै सौताने पिताबाट पटक पटक बलात्कृत हुँदै आइरहेको बताएकी छिन् ।
उनले आफ्नो पहिचान सार्वजनिक गर्दै तिन पटकसम्म एबोर्शन गरेको पनि बताइन् । उनी ७ वर्षको भएदेखि उनका सौताने पिता एनोकी एन्ड्रले आफूलाई यौन हिंसा गर्ने गरेको बताएकी छन् । ४४ वर्षीय एन्ड्रलाई हालै अदालतले २० वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।
रचेलमाथि भएको यौन हिंसामा उनकी आमा पनि संग्लन भएको बताइएको छ । त्यसैले आमालाई समेत अदालतले महिला हिंसामा सघाउ पुर्‍याएको आरोपमा ५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । अदालतले जेल सजाय सुनाएपछि रचेलले एक अन्तर्वार्तामा भनेकी छिन्, ‘दुबै जना जेलभित्र छन् । मैले अब सुरक्षीत महसूस गरिरहेको छु ।’
रचेल ४ वर्षको छदाँ उनका पिता आमासँग अलग भएका थिए । सन् २००० मा आमाले एन्ड्रसँग डेट शुरू गरेकी थिइन् । सुरूवाती दिनमा सौताने पिताले आफूलाई माया गरेको र आमासँग विवाह हुनुभन्दा एक हप्ता अघि देखि आफूलाई बलात्कार गर्न सुरू गरेको उनले बताएकी छन् ।
३८ वर्षमा २० औँ पटक आमा बन्दै एक महिला
पूर्व श्रीमतीको पीडा भुल्न बनाउन लगाए यस्तो खेलौना !
छोरी अष्ट्रेलिया पठाउन भाइसँगै विवाह !
बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टमाथि चोरीको आरोप
भियग्रा सेवनबाट भएका ४ दर्दनाक घटना
जम्मू-कश्मीर मुद्दामा पाकिस्तानले राष्ट्रसंघलाई फेरि लेख्यो चिठ्ठी